पुरुषहरुका नजरमा कस्ता महिला राम्रा ? महिलाको के देखोर खासमा आर्कषणमा पर्छन् पुरुषहरु ? यस्तो छ रहस्य – Tufan Media News
पुरुषहरुका नजरमा कस्ता महिला राम्रा ? महिलाको के देखोर खासमा आर्कषणमा पर्छन् पुरुषहरु ? यस्तो छ रहस्य
१५ पुष २०७७, बुधबार १५:३९
काठमाडौ । महिलाले पुरुषलाई हेर्ने नजर र पुरुषले महिलालाई हेर्ने नजरमा आकाश जमिनको फरक छ । जब एक पुरुषको एक महिलाको जम्काभेट हुन्छ उसको पहिलो नजर महिलाको कुन अंगमा पर्छ होा ?
यो कुरामा कसैले पनि ठ्याक्कै अनुमान लगाउन सक्दैनन् । यो विषयमा धेरै महिलाको अनुमान गलत साबित भईदिन्छ । धेरैले महिलाको छाति भन्ने जवाफ दिन्छन् । तर त्यो सत्य भने होइन ।
पछिल्लो एक सर्वेक्षणले देखाए अनुसार पुरुषको पहिलो नजर महिलाको आँखामा पर्छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिएको एक सर्वेक्षणको अनुसार आँखापछि पुरुषहरुको नजर उनको मुस्कानमा केन्द्रित हुन्छ ।
त्यसपछि मात्रै पुरुषको नजर अन्त मोडिन्छ । सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार ७० प्रतिशत पुरुषको पहिलो नजर आँखामा पर्छ । ७० प्रतिशत पुरुषले पहिलो भेटमा महिलाको आँखामा सबैभन्दा पहिला हेर्छन् ।
ब्रिटेनको आई ड्रप नामको संस्थाले २ हजार मानिसमा यो सर्वे गरेको थियो । जसमा १ हजार महिला र १ हजार पुरुष सामेल थिए ।